Android tricks Archives - Wanofi.com
Leave a Comment / Android tricks / By Elsayshop
Appi ajaa’iba suuraa, video fi faayilaa barbaachiso iccitii ta’an akka namni kamiyyuu arguu hin dandeenye godhee haala bayyee nama ajaa’ibuun kan isiniif dhoksuu danda’u App ajaa’iban isiniif qabadhee dhufee kuno! Faayidaan isa malii? Appiin kun Clock Vault jedhama faayidaan isaas haala namatti toluus salphaa ta’een faayila barbaachisa ta’e wantoota akka suuraa video fi dokumentootaa adda …
Akkaata namni hin beeknetti iccitii dhunfaa keessan kan isinii dhoksuu danda’u App ajaa’iba Read More »
Hi akkam jirtu matiin tora website keenya hundi guyya har’a wanti nuun qabanne isiniif dhufne yoo akka tasaa password Facebook keessani dagatan akkamitti akka deebistani akka argatan kan isiniif himnu ta’a. Namooni bayyeen password facebook isani yeroo bayyee ni dagatu fknf yemmu bilbila haaraa bitataan akkawonti isanii isa duuri itti gutuuf ni dogogoruu akkasumas walaluu …
Password facebook dagatamee karaa haaressuu dandeenyu! Read More »
Gosoota WhatsApp hunda bakka tokkotti isniif finee jira!
1 Comment / Android tricks / By Elsayshop
Hi akkam jirtu hordoftonni website keenya hundi? nagaa kessani akka naga tatn abdi gudda qabna! Hara’a wanti nuun isiniif qabane dhufne gosoota whatsapp hunda isiin fayyadu danda’an jenee yanne hunda dha whatsapp nuti isiniif qabane dhufnees GBwhatsapp, YOwhatsapp, fi FMwhatsapp dha akka itti gamadaniis abdi gudda qabna! hundi isayyuu update kan ta’edha haaraa kanaaf yadoof …
Gosoota WhatsApp hunda bakka tokkotti isniif finee jira! Read More »
Appii PowerDirector isa haaraa Vidiyoo kan ittin edit goonu
Yeroo amma kana namoonni bayyeen bilbila isanitti fayyadamuun video ajaa’iba ta’an hedduu yeroo isan dalagaan ni arginaa ta’a! garuu Appi gosa isa kam akka isaan fayyadaman hin beennu ta’u danda’a garuummoo namoonni bayyeen App Kan akka KINEMASTER, POWERDIRECTOR, ACTION DIRECTOR FI CUPCUT fayyadamuu! Haa ta’u iyyuu malee bayyeen isa yeroo playstore irra gadi buufne itti …
Appii PowerDirector isa haaraa Vidiyoo kan ittin edit goonu Read More »
Kinemaster haaraa (WATERMARK) kan hin qabne bufadhaa
Bayyeen keenya appi kana ni beekna jedheen yadaa kessattuu video yeroo bayyee namoonni edit gootan ni beektuu kaneen youtubera tatan immoo yeroo yerootti update gocha akka jirtan abdii guddaan qaba.! Namoonni hojii youtube hojechaa jirtan hundi kinemaster kana ni barbaaduu jedheen yadan ykn kan youtubera ta’uuf yadaa jirtan sabaabni isa kinemaster dirqama isin barbaachisa waan …
Kinemaster haaraa (WATERMARK) kan hin qabne bufadhaa Read More »
Gosoota VPN haaraa bilbila keenyaaf sirriitti nu barbaachisan
8 Comments / Android tricks / By Elsayshop
Akkam jirtuu hordoftoonni toora website kenyaa wanofi.COM naga kessanii? Nutii naga keenya Guyya har’a barnoonni keenya kan inni irratti xiyyeeffate Gosoota VPN bilbila keenyaaf nu gargaruu danda’an 2 irratti yoo ta’u haala itti fayyadama, isaniif Maqa isani wajiin isiniif tarreessina obsaan hanga xumuuraati dubbisaa isiniin jenna. 1ffaa Secure VPN－Safer and lightning fast VPN Appin kun …
Gosoota VPN haaraa bilbila keenyaaf sirriitti nu barbaachisan Read More »
NAMOONNI APPI PICSART GOLD PRO ISA BARBAADAN KUNOO ASI ARGACHUU DANDEESSU
App kanatti akka namoonni heddun gargarama jirtaan nan abdadha yeroo amma kana update ta’e jira wanttota haaraa ta’aniis off kessati dabalee nuf dhufee jira garuu isa playstore irrati gadhiifame jiru osoo hin tanee isa qarshiin bitamu irrati kanaaf eegan maree guyya har’a kana furmata isiniif ta’a jedhe yadee as irratti gadhiisen jira waan ta’eef salphaatti …
NAMOONNI APPI PICSART GOLD PRO ISA BARBAADAN KUNOO ASI ARGACHUU DANDEESSU Read More »
suuraa kee edit gochuuf ykn bareechuuf SNAPSEED fayyadami
Appi kana namoota meqan kessantu fayyadama jira ykn beeka appi photo editing irrati ajaa’iba ta’ee kana? namoonni hin beekne yoo jiraatan kuno guyya har’a isinaan barsiisa akkasumaas akka gadi bufachu dandeessan isniif godheen jira Snapseed: Appin kun immoo kan bayee nama ajaa’ibu namoota heddu biratti fudhatama kan qabu dhaSababiin isaas itti fayyadamuuf kan namaaf salphatu …
suuraa kee edit gochuuf ykn bareechuuf SNAPSEED fayyadami Read More »
APP AJAA’IBA ADOBE LIGHTROOM PRO ISA UPDATE TA’EE FAYYADAMAA
APPII Adobe Lightroom: Appin kun bayyinaan namoota photographer ykn color grade suuraa irratti hojechuuf fedha qabaniif fayidaa guddaa qaba Sababni isaas wantoota heddu dalaguuf humna kan qabuuf sirritii photo kamiyyuu edit gochuuf dandeettii kan qabu waan ta’eef Egaan suuraa kessan irratti Bifa (color) garagaraa umuuf ykn tolchuuf isiin gargaara fkn suuraa bayyee dukkanaa’a ture ifa …
APP AJAA’IBA ADOBE LIGHTROOM PRO ISA UPDATE TA’EE FAYYADAMAA Read More »
Appilikeeshinoota kanneen sadii Dafaa mobaayilii irraa balessa.
Applikeeshinootni hamoo tahan namoota dhuunfaa fi dhaabbilee yaaddoo keessa galchu. Bakka qabachuun qofa osoo hin taane madda vaayirasiiti, beeksisoota namni hin feenes namatti ergu. Dhaabbanni Google bara kana keessa qofa applikeeshinoota Android’f hamoo tahan kuma 900 haqee jira. kunimmoo kan bara 2017 ture irraa harka 80 caalmaa qaba. Applikeshinootni hamoo tahan kuni, sababoota maamiltoonni irra …
Appilikeeshinoota kanneen sadii Dafaa mobaayilii irraa balessa. Read More »